> Resource > Video > Flash in Video Converter: Beddelaan Flash in ay si fudud u Video
Wondershare Flash in Video Converter - Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa aalad diinta ka fiican in loogu badalo laga yaabaa in Flash video oo wuxuu ku raaxaysan aad Flash files jecel on iPod, Zune, PSP iyo aaladaha kale ee mobile la Wondershare Flash in Video Converter. Wuxuu ku siinayaa hawlaha kala duwan oo aad u oggolaatid in uu diinta Islaamka Dufcaddii, ku dar watermark, iyo video dalagga iyo wixii la mid ah.
Hoos waxaa ku qoran, Waxaan idin tusin doonaa sida loo isticmaalo Flash taasi dareen in Video Converter si loogu badalo Flash in kale qaabab video / audio talaabo talaabo ah
1 shuban files Flash FLV
Free download Flash in Video Converter, rakibi iyo bilowno waa. Riix ah "Beddelaan" tab> "Add Files" menu inay dajiyaan doonayay files Flash FLV aad ka your computer ama si toos ah kuwaa oo ka soo your computer si app this.
2 Dooro wax video ama audio qaab aad rabto
Hit qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo liiska qaabka wax soo saarka this app ee, halkaas oo inta badan loo jecel video iyo maqal ah qaabab ka mid yihiin. Just u tag "qaab"> "Video" ama "qaab"> "Audio" category inaad doorato qaabka aad rabto. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo files Flash FLV kaliya loo maqli karo qalabka qaar ka mid ah, waxa kale oo aad dooran kartaa qaab ku habboon wax soo saarka kaliya sida magaca aad qalab ee.
3 files Edit Flash FLV (Ikhtiyaar)
App waxay ku siinaysaa badan oo hawlaha tafatir sida beerista, jarida, falinjeeerka, biirtay, isagoo intaa ku daray watermark iyo subtitles iwm Haddii aad rabto in aad wax ka bedel files Flash ka hor diinta, kaliya u tag "Edit" in video kasta oo bar in ay doortaan muuqaalada u dhiganta.
4 bilow si loogu badalo Flash in qaabab video
In geeska hoose ee garabka midig ee Flash si video Converter, guji "Beddelaan" button in Flash bilaabaan in ay diinta ka video. Sidaas, waxaad u bedeli karaan Flash qaab kasta video kale ama qaab maqal ah si loogu isticmaalo. Riix ah "Open Folder" button in interface si aad u ogaato faylasha wax soo saarka. Waxaad ka heli doontaa faylasha la gediyay yihiin qaab aad rabto.
Features Key ee Wondershare Flash in Video Converter
Beddelaan Flash FLV in kasta oo ah qaabab video oo caan ah
Wondershare Flash in Video Converter waa barnaamij aad u fiican oo badasha Flash FLV in kasta oo ku dhowaad qaabab video caan ah sida AVI, wmv, MP4, AVI, 3GP, MP3.
Beddelaan badan files diirada Flash mid waqti.
Browse aad IE Cache oo si toos ah ay helaan files Flash ka bogagga internetka ee aad adigu booqatay.
Flash in Video Converter flash Xoog function tafatirka
Wondershare Flash in Video Converter kuu ogolaanaya in aad ku darto watermark kartoo faylka wax soo saarka si ay u soo bandhigaan ama sheegan maamulka, ama midabka video oo si gooni ah.
Si fudud in video dalagga si ay u abuuraan video la screen size kala duwan si ay u daboolaan baahida aad ciyaaryahan digital '.
The hagaajin karo wax soo saarka video saamayn aad u saamaxaaya in ay astaysto heerka jir, heerka yara, xallinta iyo xitaa muuqa u ah saamaynta fiican loo maqli karo.